श्रीमतीको स्वीकृति ! - Sajhamanch
२०७७, माघ १४ गते बिहानिको ०५:२२:०५ बजे Tuesday 26th January 2021
श्रीमतीको स्वीकृति !
January 12, 2021 12:09 pm अमित संग्रौला
चिसो मौसम छ । “श्रीमती चुल्होमा दाउरा ठेल्दै छिन् । छोराछोरी अर्को कोठामा पढिरहेका छन् । वातावरण स्तब्ध छ । पुसको महिना भएकाले चिसो अत्यधिक बढेको छ । “श्रीमतीलाई भनु या नभनु मन दोधारमा छ । थोरै पिउन पाए पनि हुन्थ्यो नि ! मौसमले पनि च्यालेज गरेको छ । अलिकति पिउँदैमा के हुन्छ र ?
जहिल्यै पिउने होर । कहिलेकाही पिउदा के हुन्छ । “श्रीमतीलाई कसरी भनु ? उनले स्वीकृति दिने होकि होइन” । अनेक प्रश्न मनमा आउँछ । अर्को मनले भन्छ चिसो समय छ भन्दैमा रक्सी नै पिउनु पर्छ र ? न पिउदैमा पनि हुन्छ नि ! सोतेले आगो फुक्दै पुलुक्क हेर्छिन । म उनलाई हेरिरहेको थिए बेला बेलामा । श्रीमती त अझ नियालेर हेर्न थालिन् । उनको गाला रातो हुँदै गयो ।
नाक पनि फुल्न थाल्यो । यस्तो लाग्दै थियोे । क्रोध उत्पन्न भइरहेको छ, “मलाई घुरेर हेर्न थालिन्” । मेरो मनभित्रको कुरा थाहा पाइन् क्या हो ? म उनको नजिकै गए ।
उनको नजिक जाँदा एक किसिमको डर पनि लाग्यो । मैले बिस्तारै सोधे सावित्रा म तिमीलाई खाना पकाउन सहयोग गरुँ उनले केही बोलिन् पाकेको खाना अगेना माथी राखिन। केहि समय पछि उनी शान्त भइन । थोरै मुस्कुराइन र, भनिन् दराजभित्र अस्तिको व्हिस्की राखी दिएको छु गएर पिउनुहोस् । त्यसपछि खाना खान आउनु चाँडो मैले स्विकृति दिए ।
January 12, 2021 12:09 pm | गीत/संगीत/मनोरञ्जन,साहित्य